चीन उच्च गुणस्तरीय ३ '' 'हतियार निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु संग कालो सौंदर्य तालिका - JTL धातु
1. हतियार संग 36 "कालो सौंदर्य तालिका को उत्पादन विवरण
स्टेनलेस स्टील र टिकाऊ काठ बोर्डहरु: यो ३ '"हतियार संग कालो grooming टेबल टिकाऊ कण बोर्ड र स्टेनलेस स्टील फ्रेम र खुट्टा, एक धातु जाल ट्रे सहित बनाइएको छ। तालिका को राम्रो गुणस्तर यसको लामो समय सेवा जीवन सुनिश्चित गर्नेछ।
स्थिर घरपालुवा जनावर तालिका: जोड र टेबलटप र टेबल खुट्टा दृढतापूर्वक समर्थन को लागी धातु bracings को चार टुक्राहरु छन्। धातु जोड्ने भाग तालिका को लागी धेरै स्थिरता प्रदान गर्न एक त्रिकोण आकार बनाउँछ। ३ arms '' हतियार संग कालो ग्रूमिंग टेबल को अधिकतम लोड असर क्षमता १२० kg/२4४.l lb छ।
तह टेबल खुट्टा: हतियार संग ३ 36 '' कालो ग्रूमिंग टेबल को खुट्टा foldable छन् कि उनीहरु केन्द्र भाग मा फिर्ता जोड्न सकिन्छ। यो foldable डिजाइन तालिका को उपयोग र संगठित गर्न को लागी सुविधाजनक बनाउँछ। यो पनि धेरै ठाउँ लिई बिना पोर्टेबल छ।
एच आकार फ्रेम को तंग जडान: एच फ्रेम को स्टेनलेस स्टील ट्यूबहरु मा जोडिएको जोड मा शीर्ष मा दुई आस्तीन को उपयोग गरीएको छ, र तब पूरै एच आकार फ्रेम दृढता संग दुई clamps द्वारा टेबल सुरक्षित छ। यी फास्टनिंगहरु को सबै घुमाउने knobs, जो सेट अप, समायोजन, लक र अलग गर्न को लागी सजीलो संग आउँछ।
धातु जाल भण्डारण ट्रे: ३ arms '' हतियार संग कालो grooming टेबल ब्रश, कंघी, कपाल ड्रायर, कैंची, आदि जस्तै उपकरणहरु, भण्डारण को लागी तल एक जाल ट्रे संग सुसज्जित छ। प्रत्येक पक्ष निर्धारण को लागी दुई हुक भालु। यो प्रयोग मा छैन जब तल तल ट्रे लिन को लागी सुविधाजनक छ। जाल ट्रे को अधिकतम लोड असर क्षमता १०kg/२२lb छ।
2. हतियार संग 36 "कालो सौंदर्य तालिका को उत्पाद विशिष्टता
३ 36 "हतियार संग कालो सौंदर्य तालिका को उत्पादन आवेदन
४. हतियार संग ३ 36 "कालो सौंदर्य तालिका को उत्पादन योग्यता
JTL बिल्कुल तपाइँ तपाइँ हतियार र अन्य घरपालुवा जनावरहरु को आपूर्ति संग 36 "कालो सौंदर्य तालिका को आवश्यकता के साथ प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टीम उच्च गुणस्तरीय तालिका र मूल्यवान ग्राहकहरु लाई अनन्य सेवाहरु प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। ग्राहक सन्तुष्टि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो खोज हो। हामी पहिले र बिक्री सेवा पछि5× 24 घण्टा सेवा छ। हामीलाई छान्नुहोस्, तपाइँको सबैभन्दा भरपर्दो साथी !!
Q: हतियार संग 36 "कालो ग्रूमिंग टेबल को अधिकतम लोड हो?
A: हतियार संग 36 "कालो सौंदर्य तालिका max.120kg/264.6lb लोड गर्न सक्नुहुन्छ।
हट ट्याग: 36 "हतियार, निर्माताहरु, आपूर्तिकर्ताहरु, उद्धरण, कारखाना, चीन मा बनेको, स्टक मा, थोक, गुणस्तर, चीन, नवीनतम बिक्री, छुट संग कालो सौंदर्य तालिका